Antaimby - Sambava: Zaza 02 taona notsimponina teny amoron-dalana
lundi, 01 juillet 2019 11:37
Taitra ny mpiantsena teto Antaimby, omaly tolakandro, raha nahita zaza vavikely tokony ho roa taona mitsirara matory amin ny tany. Tsy tapitapitr’izay dia vory ny olona nijery, ary tao anatin’izany no nisy nahafantatra ny anaran’ny Ray aman-drenin’io zaza nisy nanary io.
Noho ny fahitana fa toa zaza marary ity mitsirara ity, dia nentin’ireo olona tsara sitrapo teny amin’ny hopitalibe Besopaka ilay zaza, saingy tsy nahitana soritr’aretina izy hoy ny mpitsabo ka nasaina niverina.
Nampahafantarina ny zava-misy ny Polisy tao amin’ny Commissariat de Police Sambava Centre, efa nisy nahafantatra rahateo ny adiresin’ny ray aman’drenin’ilay zaza.
Nipoitra Rtoa Noé renin’ilay zaza nony hariva ny andro ary nanazava fa tsy nanary anaka izy fa « noho tsy fandraisan’ilay rain-janany andraikitra na dia hitany fa tsy salama io zaza io dia voatery nomeko azy ilay zaza raha sendra nifanojo teny an-tsena izahay », « kinanjo dia nilaozany io zanakay io », hoy Rtoa Noé mipetraka etsy Antanifotsy Sambava.